Iindaba ze-JW FILM-Umboniso we-NINGBO CHEM-PLUS kunye ne-JW FILM
Ifilimu yokuKhusela i-Paint yokuzenzekelayo
Ifayile yeTest Window yeThayile
Ifilimu yokuSonga iMoto yeVinyl
Iimveliso ezongezelelekileyo zePPF
Ifilimu i-JW ngumboneleli ophambili wepeyinti ye-thermoplastic polyurethane (TPU) kunye netekhnoloji yokukhusela umphezulu. Iidrafti ezinamathelayo, iinjineli zeemoto, abenzi bezixhobo kunye nabenzi bemiboniso ye-elektroniki kwihlabathi liphela bajonge kwifilimu yeJW kwimiboniso bhanyabhanya ephezulu yokukhusela umphezulu. Ifilimu ye-JW yeyona nto inkulu yokukhutshwa kweefilimu zokukhusela ipeyinti ze-TPU ezingafakwanga uphawu kwi-aftermarket yeemoto zehlabathi.
Ifilimu yeJW isebenzisa ubumbeko lwe-thermoplastic polyurethane yokubonelela ngenkqubo ebalaseleyo yokufumana uxinzelelo lwe-PSA. Iifilimu zinobhetyebhetye kakhulu kwaye zibonelela ngengcaciso ebonakalayo, ehambelana ngokugqibeleleyo kwindawo ezintathu-ntathu, ukumelana ne-UV, ukugqitywa kwe-Class-A gloss kwaye kwenziwa kusetyenziswa ubuchwephesha bokufuna ukuvelisa ezona bhanyabhanya zibalaseleyo kumzi mveliso.
Itekhnoloji yokukhusela umphezulu yeJW yefilimu, efumaneka kumaleko angatshatanga kunye nolwahlu oluninzi, ukunqanda izinto ezikhutshiweyo, ukugawulwa, kunye nomnye umonakalo omkhulu kwisinyithi, iglasi, okanye ipeyinti. Isetyenziswe kuludwe olubanzi lwezicelo ezivela kwiinqwelo-ntaka zeehelikopta ukuya kwizixhobo eziselfowuni iifilimu ezizinzileyo zibonelela nge-abrasion kunye nokuchasana nefuthe. Banokusebenza njenge-interlayer ekhuselayo xa begoba izinto kwiphepha lephepha lesinyithi.
Ifilimu ebhetyebhetye nayo inokwenziwa ngepakethe ye-antibacterial ukukhusela iindawo ezisemngciphekweni zemiboniso yedijithali enabasebenzisi abaninzi. Emva kokutyabeka iifilimu ezikhuselayo kunokufa kunqunyulwe kulungelelwaniso oluthile ukwandisa ubomi bokubonisa isikrini kwizixhobo ezahlukeneyo ze-elektroniki.
Ifilimu ye-JW ngenxa yokusebenza okuphezulu kwemveliso, ubuchwephesha obuphambili kunye nomgangatho ogqwesileyo, iye yaba ziimpawu ezaziwayo zehlabathi zefilimu ebonakalayo. Kule minyaka idlulileyo, bephethe uphawu lokuqonda kunye nokuthembela kwabathengi, ngenjongo yokujonga ngokungqongqo kunye nokuziqhelanisa nesimo sengqondo sabantu esijolise ebantwini, sinethemba lokuba ngumgangatho wokuqala wefilimu yokhuseleko lwepeyinti.
EKHAYA iimveliso I-KPAL inkonzo iindaba ZOQHAGAMSHELWANO
Yongeza: Igumbi 516, 5 / F, No.1 Building, 818 Jinyuan Road, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang, China.
UBOMI: + 86-13857400831